IGranny Flat, oziphethe ngokupheleleyo kwiNth Curl Curl - I-Airbnb
IGranny Flat, oziphethe ngokupheleleyo kwiNth Curl Curl
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguLaura
Ifulethi langoku, kwaye lixhotyiswe ngokupheleleyo kumgama wokuhamba ukuya ezivenkileni, kwiivenkile zokutyela, kwiivenkile zokutyela kunye nolona lwandle lubalaseleyo lwaseSydney.
Uxolo kodwa akukho ukufikelela kwi-pool kubahlali be-Granny Flat esetyenziswa ngabanini kuphela. Indawo yeBBQ ebekwe ngasemva kwendlu enkulu ikwasetyenziswa ngabanini.
Nceda ubhekisele kwikhonkco elingasentla kwiwebhusayithi yethu yebhunga leeLwandle eziMntla apho uya kufumana iinkcukacha malunga neziganeko ezizayo, ubugcisa kunye nenkcubeko, iilwandle, iipaki kunye neendlela, amachibi amatye, imidlalo kunye nokuzonwabisa, amachibi okudada, njl.
Ibekwe ngaphantsi kohambo lwemizuzu eyi-15 lunxweme olungaziwayo kwindawo yethu yaseNorth Curl Curl. Ngokuqhelekileyo ayixakekanga kangako kwiilwandle ezaziwa ngcono zaseDee Why, Freshwater kunye neManly kwaye ine-vibe enkulu yasekhaya.
Apho abantu balapha baya khona ukuze bafumane ikofu yabo, isidlo sakusasa, isidlo sasemini, isidlo sangokuhlwa, iibhiya, iiwayini kunye nee-vibes ezilungileyo:
IWarringah Mall ikwimizuzu nje eli-10 yokuqhuba kwaye inayo yonke into onokuyidinga ngokwembono yokuthenga. Ihlala iColes kunye neWoolworths (iivenkile ezinkulu ezimbini ezithengisa ukutya), iifashoni zamadoda nabasetyhini, abantwana kunye nosapho, ikhaya, kunye netekhnoloji, imidlalo kunye nokuzonwabisa kunye nokutya kunye nobuhle kunye nempilo enokukhetha kuyo.
Ukusuka kwi-high end couture ukuya kwi-funky boutique, 'imvelaphi' yentengiso ukuya kwi-sefa kunye nokunxiba ezitalatweni, uManly ngokuqinisekileyo etsala umdla wefashoni ngengqokelela yakhe ye-eclectic kunye nesembindini yeevenkile ezingaphezulu kwama-200. Ngaphakathi kweCorso edumileyo, efunyenwe kwiindlela ezifihlakeleyo okanye kwiimarike zangaphandle ngempelaveki, fumana ifashoni, ukutya, izinto zasekhaya, izixhobo zezipho kunye nazo zonke izinto zokuphila. Thenga ubuhle, ubucwebe kunye nobugcisa, kunye nezinto zokudlala zabaselula nabancinci entliziyweni.
Ivenkile yegrosari ekufutshane (ngaphandle kweevenkile zekona) iseDee Why (5-minute drive) iColes neWoolworths zombini zineevenkile apha nceda ubone iiwebhusayithi zezalathiso njl.njl.
Uqhagamshelwano olukhethwayo luya kuba ngeselfowuni ndingaqhagamshelwa kule nombolo 0427090222
Inombolo yomthetho: PID-STRA-17046-2
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- North Curl Curl